Azia Atsimo-Atsinanana: Fitsangantsanganana An-Tsambo Mampanonofy sy ny Finamanana · Global Voices teny Malagasy
Finamànana mandra-paty azo avy amin'ny fampifangaroana kolontsaina marolafy
Voadika ny 02 Avrily 2019 11:50 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, Français, English
Mandraisa sambobe fitsangantsanganana iray tsara tarehy, fenoy tanora 300 mafana fo avy amin'ny Fikambanan'ireo Firenena ao Azia Atsimo Atsinanana (ASEAN), ataovy ao koa i Japana, ary ireo hetsika ara-kolontsaina sy sosialy, dia afangaroy ao. Vokatra azonao: fifamatorana mafy sy finamanana mandra-maty. Io no tantaran'ny Sambo Fitsangantsangananaan'ny Fandaharanasa ho an'ny Tanora ao Azia Atsimo Atsinanana (SSEAYP) na “Programme Kapal Belia Asia Tenggara” ao amin'ny M. S. Nippon Maru, [amin'ny teny anglisy toy ireo blaogy voatanisa rehetra], vatsian'ny governemanta japoney vola mba hanentanana ny finamanana eo amin'ireo tanoran'ny ASEAN sy Japana.
Araka ny voalazan'ny BPY 2008, blaogy iray natokana ho an'ireo mpandray anjara amin'ny andiany faha-35 amin'ny SSEAYP tamin'ny taona lasa, dia fandaharam-potoana isantaona ho an'ireo tanora io, ka manana tanjona:
Turquoise and Roses, iray amin'ireo mpandray anjara avy any Brunel, no nizara ny zavatra niainany tao anatin'ireo 52 andro nitsangantsanganany an-tsambo sy nandritra ireo fiatoana isaky ny seranana. Araka ny voalazany, nahaizan-javatra betsaka ny zavatra niainana:
Araka ny voalazan'ny blaogera, nisy fiantraikany lalina ilay dia, izay vao tsy ela akory nahafahany nitsidika an'ireo mpandray anjara hafa tao Kuala Lumpur any Malaisie. Afaka nanao fitsidihana ofisialy sy ara-pomba fanajàna marobe izy tao anatin'ny sehatr'ilay fandaharanasa izay nahafahany nanitatra ny tambajotrany.
Azo antoka fa tsy ho afaka niresaka tamin'ny tompon'ireo ozinina Vietnamiana aho raha tsy nisy an'ity fitsangantsanganana ity. Iza no mahalala… indray andro any aho mety mila mpampiasa vola, ho fantatro izay hifandraisako. Ireo namako, ireo tanora mpandraharaha, dia tena nientanentana be tamin'ity karazana fandaharanasa ity.
Ankoatra izay, nahazendana ny fianakaviana mpampiantrano. Tao Indonezia, natory tao amina vehivavy iray mpanao politika fakan-tahaka izy, izay hatramin'ny nahafatesan'ny vadiny dia izy irery no namelona ireo zanany. Tao Bangkok, ity lehilahy tena manankarena izay mitantana banky tailandezy ity no tena nampianatra azy zavatra betsaka!
11 Janoary 2019Azia Atsinanana